Taariikhda My Butros » Shan sidii aad u heli Back Your Ex.
Jacaylka & Sex
Shan sidii aad u heli Back Your Ex.
Last updated: Nov. 27 2020 | 3 min akhri
Haddaba iyagii aad waayey? Isaga qaatay siiyo? Ma tusin xiiso filan in baahidooda iyo baahida xiriirkaaga? Lumay jacaylka aad nolosha iyo dib aad isaga rabnaa? Waxaa ay noqon doontaa waddo adag ay dib ugu noqdaan tala hesho balse waa si fiican u qalantaa. Ka dib dhan ma aha maalin kasta oo ka mid kulmay jacaylka ay nolosha oo dhab ahaantii ay is dhaafsasho dareenkooda. Liiskaan dheer ee dadka xawaaraha-shukaansi socda, iwm … waa ku filan si ay u muujiyaan in waxa aad la arkay iyadoo nin kani waa dhif. Laakiin markaas aad u ogaato dhammaan in dhammaan diyaar iyo dareensan darana laga cabsado hadda sababta oo ah iyaga ma aad qaban karto in hub ama iyaga ula hadasho. Laakiin ma dhan waxaa laga badiyay. Waxaad ugu yaraan isku dayi kartaa in aad ugu adag in ay dib u hesho iyo siday suuragal u tahay in haddii ay jiraan waxaa jiray jacayl xoogan ay weli jiri doonaan dhinaca aad. Dhammaan waxa aad u baahan tahay inaad samayso waa u dhididdaa sida ay u badan tahay isku dayayaan inay ku sameeyaan iyo isku day in aad ugu adag si aan u muujiyo sida saxda ah waxa ay u jeedaan in aad. Halkan waxaa ku qoran qaar ka mid ah oo kaliya siyaabaha aad sameyn kartaa in guys iyo gals!
1. Sharax sababta aad u yeeshay Aad
Waxa uu u badan tahay wareertay sababta aad u soo qaatay siiyey ama u dhaqmo si xun. Tani macnaheedu ma aha in aad u baahan tahay si ay u sameeyaan qaar ka mid ah sheekada oo baahsan oo ku saabsan sababta aad u sameeyey. Waxaa loola jeedaa daacadii. Waxaa laga yaabaa in aad ahaayeen dhalinyaro ah, aad ma oga waxa aad lahaa ilaa iyo inta uu tegey ama lambarka mid ka mid ah sababaha. Qofna waa qumman yahay iyo hadii ay si dhab ah aad u jecel yihiin ay aad u jeclaan doonaa, waayo, wax walba oo ay neceb adiga kugu saabsan oo aad u. Laakiin isgaarsiinta inta badan waa caqabad weyn ee xiriirka. Waxay u baahan yihiin in ay fahmaan sababta aad u yeeleen wixii aad ku samayseen. Waxaad iyaga lagu leeyahay oo ay qiimayn doonaa daacadnimo iyo xaqiiqda ah in aad ahaayeen geesi ah oo u aheyn inuu aad aqabashay inaad joogi jiray qaldan.
2. Joog xiriir la Them
Waxa cad in tani ay tahay mid aad u adag oo laga yaabo, maxaa yeelay, iyagu ma doonayaan in ay ku sii jirto adiga xidhiidh kula. Iyo in aad ixtiraamaan in. Laakiin wuxuu iyagii fudud haddii aad arki uu salaanta iyo dhawr eray. Tus in aad mana halmaamay. Tus in aad daryeesho oo aad doonayso in aad waqti la qaato, laakiin in aad ixtiraamaan in kubada ay tahay in ay maxkamadda hadda.
3. U sheeg inaad ka Sorry
Waxa ay u muuqataa sahlan yahay, laakiin inta badan waa waxa ugu adag dunida oo dhan ee qofka in uu sameeyo. Dhinaca kale waxaa jira dad ku odhan aad u badanaa. Waxaad u baahan tahay in ay isu halkan. Waxa loo baahan yahay in ay tiiraanyo leh oo daacad ah. Waxaad u baahan tahay si aan u muujiyo in runtii waxaad tihiin xumahay wixii aad ku samaysay iyaga. Waayo, dhaawicid. Oo waa inaad u baahan tahay in lagu tijaabiyo in aad xumin iyo in ay wax isbaddali doonaan haddii ay dib kuu celiyaan markan. Waxa aan xaq ugu noqon karaa hadal aan micne lahayn. Waxay ku marayo arki doonaa si toos ah.
4. Tus in aad beddelay
Tani macnaheedu ma aha sida qof sababtoo cad looma dareen in in. Waxa uu ahaa qofka aad tahay qof ahaan taas oo ka dhigtay isaga ku dhici jacayl kula in meesha ugu horeysa ka dib dhan. Waxaa loola jeedaa in aad ku tijaabiyo in aad bedelay ah ee ka jira qeybo xun in aad eryay labadaba marka laga reebo in meesha ugu horeysa. Waxaad u baahan tahay si aan u muujiyo in aad ka arki kartaa halka aad khalad hadda ayuu baxay, oo aad baratay waxaa ka.
5. Dagaalamo isaga
Mid ka mid ah waxyaalaha ugu taataabtay aad samayn karto waxaa la dagaalamaan ninka aad jeceshihiin. Waxa kaliya ee aad u dagaalamo qof aad jeceshahay ka dib dhan sida ka soo horjeeda jeclaan ama fanaaniinta cusub. Iyo inay idinla Dagaallamaan ama iyaga oo u muujinaya inay kulligood in arrimaha inaad hadda aad caddaynaya inta aad u jeclahay. Daacad iyaga la. Waxaad dareemi jeclaan qayb weyn ka ah nolosha maqan yahay iyo in aad ayaay la il daran. Diyaar u noqo naftaada saaray line iyo yaanay kibir hesho in sida ugu. Qofna ma doonayo in la tagay cidlo leh ay ku faanaan tabta.
5 Dating hardamayaan aad jebiso waxaa habboon iyo cararaan From
Waxaan aragto qof Waxaan jeclaan – Hadda Maxaa?
Caddayn aad la Online Dating Profile Photo
Shan Su'aalaha Daters Online daalan of Hearing